Your Like Power (Fuzhou) Co. , Ltd သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ပြပွဲများသည်လေစုပ်စက်နှင့်အထွေထွေမော်တာများအတွက်မော်တာအိမ်များဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုသည်စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်၊ ပြည်ပမှတင်သွင်းသောသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းဒီဇယ်မီးစက်အစုံမပါပါက၎င်းတို့၏လည်ပတ်မှုသည်လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အားထိခိုက်လိမ့်မည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်သုံးချက်၊ အမြင့်၊ အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆများသည်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာအပေါ်အထူးသိသာသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဒီဇယ်အသုံးပြုမှု ...
မအောင်မြင်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - A .. ဆီအဆင့်၌ဆီစုပ်စက်နိမ့်သည်။ B. ရေနံဖိအားထိန်းညှိခြင်းနွေ ဦး ကျိုးခြင်း၊ C. ရေစစ်စစ်ရာဘာဖျာအိုမင်းခြင်းဆီယိုစိမ့်ခြင်း D. ဆီဖိအားဖိအားမီတာကွဲခြင်းအီးစုပ်စက်ရှိဆီစစ်ထုတ်ခြင်းပိတ်ဆို့ခြင်း ပြဿနာဖြေရှင်းရန် A. ဆီစုပ်စက်ကိုအပြည့်ထည့်ရန်အချိန်မီဆီ B. B ...
ဒီဇယ်မီးစက်အခန်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် 1. ပထမ ဦး စွာလျှပ်စစ်ပညာရှင်သည်မီးစက်၏လည်ပတ်မှုစည်းမျဉ်းများအတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မီးစက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင်ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုလုပ်ပါ။ ၂။ မီးစက်၊ အအေးခံစက်၊ လောင်စာအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုစစ်ဆေးပါ။
ယူနစ်မစမီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ၁။ ချောဆီ၏ဆီအဆင့်၊ အအေးခံအဆင့်နှင့်လောင်စာဆီပမာဏသည်သတ်မှတ်ထားသောစောင်းတန်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးအတွင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ၂၊ ပိုက်လိုင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုစီ၏ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဆီထောက်ပံ့မှု၊ ချောဆီ၊ အအေးပေးစနစ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
21-02-25 တွင် admin မှ
၂၀၂၀ တွင် Covid-19 အသစ်ကြောင့်ထိခိုက်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများသည်များစွာသောသက်ရောက်မှုများခံစားခဲ့ရပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အော့ဖ်လိုင်းသုံးစွဲမှုများအတွက်ကြီးမားသောအအေးလှိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အိမ်ခြံမြေ၊ အော့ဖ်လိုင်းလက်လီစသည့်အဓိကလုပ်ငန်းငါးခုသည်သင်နှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။
၂၀၂၀ တရုတ် Bauma ပြပွဲ
Bauma China၊ Shanghai International Construction Machinery, Building Materials Machinery, Mining Machinery, Construction Vehicles and Equipment Expo ကို Shanghai New International Expo Center မှာနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပပါတယ်။ Bauma China သည်အာရှဒေသတွင်ကျွမ်းကျင်သောပြပွဲပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် National High-tech Enterprise Certificate ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
19-12-02 တွင် admin မှ
“ သိပ္ပံသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောပြည်တွင်းမောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ “ နည်းပညာအသစ်နှင့်အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်နည်းပညာတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောလုပ်ငန်း၏အဓိကလွတ်လပ်သောအသိဥာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
Timor Lest ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်
19-09-10 တွင် admin မှ
စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်ဆောင်း ဦး ရာသီပွဲတော်နီးကပ်လာသောအခါ Timor Lest ၏ဒုတိယဥက္ကဌနှင့်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့ လာရောက်၍ ဖြန့်ဝေသောစွမ်းအင် CCHP နှင့်ပင်လယ်ရေမှိုများစုပ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားပျော်ရွှင်သောနှုတ်ဆက်စကားများပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ...
၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် Fujian ပြည်နယ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး၏ ဦး ဆောင်လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
17-07-01 တွင် admin မှ
ဤလက်မှတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်ခိုင်မာသောလည်ပတ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရှိသည်၊ ခိုင်မာသောဘဏ္financialာရေးစနစ်၊ ခိုင်မာသောစျေးကွက်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မက်လုံးပေးယန္တရားရှိသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းသည်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာနှင့်စိုက်ပျိုးမှုတန်ဖိုးအလွန်အမင်းရှိသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ...